Isu takatumira nezveMilo, kuwanikwa kweBay. Chinangwa chaMilo kuve nezvigadzirwa zvese pasherufu yega yega mune imwe nyaya inowanikwa pawebhu. Uye ivo vatove kusundira zvitoro zvenguva ino yezororo! Kune mamwe matipi makuru pano nemikana yezvitoro zvekutengesa kuti vawedzere yavo yekutengesa nekutengesa nemotokari kuchitoro chavo kubva online. Inonzwika senge inguva yekudziya iyo Jingle Bhero uye iyo Gingerbread makuki, uye tanga kutyaira
Vhiki rapfuura ndakataura naRob Eroh, anomhanya nezvigadzirwa uye mainjiniya matimu kuMilo. Milo inzvimbo yekutenga yekutsvagisa injini inosanganisirwa yakananga kune mutengesi wePoint of Sale (POS) kana Enterprise Resource Planning (ERP). Izvi zvinobvumidza Milo kuve yakanyatso tsvaga injini yekutsvaga kana zvasvika pakutsvaga zvinhu mune yekuverenga mudunhu rako. Chinangwa chaMilo kuve nezvigadzirwa zvese pasherufu yega yega munyaya dzese pawebhu…
Gore rekupedzisira iro randakapedza naPatronpath rave riri rinoshamisa roller coaster kukwira. Iyo kambani iri mukukura kukuru kukura uye kubudirira zvakanyanya! Takakunda mubairo weTechpoint Mira. Isu takapedza kuvandudza kusangana kwe4 POS - Micros, POSitouch, Comtrex uye Aloha. Isu takagadzirisazve mushandisi interface kuti tiwedzere kutendeuka kwevatengi vedu. Isu takawedzera redundancy uye chengetedzo maficha kune chishandiso. Isu takatokanda muRestaurant Nzvimbo saiti yedu
Muvhuro, Mbudzi 5, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Mangwanani ano, Mark Gallo (Mutungamiri waPatronpath) agovana chinyorwa chikuru muThe Indianapolis Star nezve nhoroondo nezvinangwa zveTechpoint, boka redunhu rekukurudzira tekinoroji muno muIndipolis. Sezvineiwo, ini ndakakokwa nevanhu vane mutsa kuBitwise Solutions kuti ndive muenzi wavo kumusangano weTechPoint neChishanu chino. Kutenda kuna Ron naKim nekukoka! Maka akandipa zuva rekuzorora kuti ndiende uye ndinozvifarira chaizvo. Ichi chidiki '